အမေး၊ အဖြေ (၃) – BSI Learning Academy
Home Uncategorized အမေး၊ အဖြေ (၃)
Admin October 20, 2020 November 28, 2020 Uncategorized
“တီချယ် သမီး Google မှာ ရှာကြည့်တာ.. အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပေါင်း (၂) သောင်း သိမှ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး ပြောတတ်မှာလို့ တွေ့တယ်။ ဒါဆို သမီး ဘယ်စာအုပ်က စကားလုံးတွေကို တစ်နေ့ ဘယ်လောက် ကျက်ရမလဲ တီချယ်။”
ဒီမေးခွန်းကို မေးလာသူကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ မေလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ BSI Learning Academy အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားသင် သင်တန်းကျောင်းလေး စဖွင့်စဉ်က General English အတန်းကို တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ “ဟေမာနှင်း” ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစဉ်အခါကတော့ သူမက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ အခုတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေး (၂) ယောက်ရဲ့ မေမေ ဘဝကို ခံယူရင်း သူမရဲ့ ဘဝအိမ်မက်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အကောင်အထည်ပေါ်အောင် စွမ်းဆောင်နေသူ တစ်ယောက်ပါ။
လေ့လာသင်ယူ၊ သင်ကြားလေ့ကျင့် ပေးလာခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားကို အမှန်တကယ် တတ်မြောက်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်၊ စနစ်တကျ ပြန်လည် အသုံးချ ပြောဆို၊ ရေးသားတတ်လိုပါက..
စကားလုံး (Vocabulary) တွေ နှုတ်တိုက် ကျက်မှတ်ရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ပါ။
ဘာသာစကားတစ်ခု လေ့လာသင်ယူရာမှာ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နှုတ်တိုက် ကျက်မှတ်ရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ပါပေ။ ထိုထိုစကားလုံးကို ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အောင် သုံးရမယ်ဆိုတာ စာကြောင်း၊ စာပိုဒ်၊ စာပုဒ်နဲ့ မဖတ်ဖူး၊ နားမထောင်ဖူးပါက အလွှဲလွှဲအချော်ချော် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ လမ်းထိပ်မှာ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင် ရှိတယ်.. လို့ ရေးချင်၊ ပြောချင်တယ် ဆိုပါစို့။
စကားလုံးတွေကိုပဲ နှုတ်တိုက် ကျက်မှတ်ထားတဲ့သူက စဉ်းစားမယ်.. “လမ်း” ဆိုတော့ street.. “ထိပ်” ဆိုတော့ top.. “စားသောက်ဆိုင်” ဆိုတော့ restaurant လို့.. တွေးပြီးတော့ အောက်ပါအတိုင်း စာစီလိုက်ပါတော့တယ်။
The restaurant is at top of this street. ❎
မြန်မာလိုတွေးပြီး ကျက်မှတ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို ထင်သလို စီချရေးတဲ့အခါ အဆင်မပြေပါ။
There isaresturant on the corner of this street. ✅
ဆိုတဲ့ စာကြောင်းဝါကျမျိုးကို မဖတ်ဖူး၊ နားမထောင်ဖူးရင် အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ။
ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရအောင် စနစ်တကျ ဘယ်လို ရေးသား၊ ပြောဆို သုံးနှုန်းလည်းဆိုတာကို မိမိဖတ်လိုက်တဲ့ စာကြောင်း၊ နားထောင်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာကနေ ခံစားပြီး နားလည်သိရှိလိုက်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ အတွေ့အကြုံအရ ယူဆပါတယ်။ တကယ်ခံစားနားလည်တတ်ပါမှ စနစ်တကျ မှန်ကန် သင့်လျော်စွာ ပြန်သုံးတတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါက မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို သိပ်မသိသေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က ကျွန်မကို ပြောခဲ့သလို “သားကို ငှက်ပျောသီး အခွံချွတ်ပေးပါလား ဆရာမ..” ဟု သုံးနှုန်းပြောဆိုမိတတ်ပါတယ်။ “အင်္ကျီ ချွတ်လိုက်” လို့သုံးနှုန်းပေမယ့် “ငှက်ပျောသီး အခွံချွတ်လိုက်” လို့မပြောတာ သူ မသိသေးတော့ သိတဲ့စကားလုံးနဲ့ ပြောလိုက်တာပါ။
ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးနှုန်းပြောဆိုတတ်ဖို့ စကားလုံး (vocabulary) များကို နှုတ်တိုက်ကျက်မှတ်ရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ပါပေ။
အင်္ဂလိပ်လို မှန်ကန်စနစ်ကျစွာ ရေးသားထားသော စာများကိုဖတ်သောအလေ့ ရှိရမည်။
အင်္ဂလိပ်လို အသံထွက်မှန်မှန် အသုံးအနှုန်းမှန်မှန်ဖြင့် ပြောဆိုထားသည်များကို နားထောင်သော အလေ့ရှိသင့်သည်။
အသုံးအနှုန်းများကို သတိထားလေ့လာတတ်၊ ခံစားမှတ်သားတတ်ရမည်။
စကားပရိယာယ် (Synonym) များကို သတိထား လေ့လာမှတ်သား တတ်ရမည်။
မိမိ လေ့လာမိသော စကားလုံးအသစ်ကို သုံးကာ ဝါကျဖွဲ့ရေးသားလေ့ ရှိပြီး၊ တတ်သိသူကို ပြသကာ Feedback ယူနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
အခါအားလျော်စွာ vocabulary test တွေကို ဖြေဆိုကြည့်ပြီး မိမိ level ကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
အောက်ပါ လင့်ခ်ပါ Test လေးတွေကို ဖြေဆိုကြည့်ပြီး မသိသေးတဲ့ စကားလုံးတွေကို Online Dictionary မှာ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို သာမက၊ ထိုစကားလုံးကို သုံးပြီး ဝါကျဖွဲ့ပြထားတဲ့ စာကြောင်းတွေကို ဖတ်ကြည့်လေ့လာသင့်ပါတယ်။ သို့မှသာ ထိုစကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည် ခံစားတတ်ပြီး မှန်ကန်စွာ ပြန်သုံးတတ်ဖို့ အလားအလာများမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိ level နှင့် သင့်တော်သော အောက်ပါ လင့်ခ်ပါ စာအုပ်များသုံး၍လည်း လေ့လာလေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
တစ်ပတ် (၄) နာရီ၊ (၁) နှစ် နာရီပေါင်း (၂၀၀) ခန့်ဖြင့် (၆) နှစ်ခန့်၊ အားလုံး စုစုပေါင်း နာရီ (၁၂၀၀) ကျော် ကျွန်မ သင်ပေးခဲ့ဖူးသော ကလေးတစ်ယောက်သည် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားကို အမှန်တကယ် တတ်မြောက်ပြီး အခြေခံပညာအထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ပြီးသောနှစ်တွင် IELTS ဖြေရာမှာ Overall Score 7.5 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်စဉ်တွင်လည်း နိုင်ငံခြား student exchange program တစ်ခုတွင် ရွေးချယ်ခံရပြီး Netherlands နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူမ တက်ရောက်ခဲ့သည့် BA (International Relations) ဂုဏ်ထူးတန်းကိုလည်း Roll One ဖြင့်ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
စနစ်တကျ သေသေချာချာ နာရီပေါင်း (၁၅၀၀) ကျော် သင်ပေး၊ လမ်းညွှန်ပေးပြီး နောက်ထပ် နာရီပေါင်း (၁၅၀၀) ကျော်လောက် အိမ်စာလုပ်ကာ ဖတ်မှတ်၊ နားထောင်၊ ပြောဆို၊ ရေးသားကာ လေ့လာလေ့ကျင့်ပါက အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားကို အမှန်တကယ် တတ်မြောက်နိုင်ကြောင်း ကျွန်မကိုယ်တိုင် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ဖူးသော ကလေးများက သက်သေပြလျက်ပါ။ ကျွမ်းကျင်အဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုရင် နာရီပေါင်း (၅၀၀၀) ကနေ (၁၀၀၀၀) လောက် ထိတွေ့ကာ လေ့လာလေ့ကျင့်နေဖို့ လိုသည်သာ။ ဒါဟာ English language မှ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ဘာသာရပ်မဆို နာရီပေါင်း (၁၀၀၀၀) ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ပြီးသွားရင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖြစ်သွားသည်ပင်။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ထိုကဲ့သို့ လေ့လာမှတ်သားခဲ့တာကြောင့် တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ English Composition ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံက ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဆုပေးပွဲမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံပါ။ မှတ်ချက် – ထိုစဉ်အခါက သိပ်မပြုံးတတ်ခဲ့ပါ။ အခုများတော့လည်း ကိုယ့်စာသင်ခန်းထဲ ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေ ပြုံးရွှင်ရေးအတွက် အရင်ကထက် အများကြီး ပိုမိုပြုံးတတ်ခဲ့ပါပြီလေ။)
၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဒုတိယ မာစတာ တက်နေစဉ်ကလည်း SSEAYP (Ship for Southeast Asian Youth Program) မှာပါဝင်ခွင့်ရပြီး ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံ (၅) နိုင်ငံကို ရောက်ခဲ့တာ English language proficiency ကောင်းခဲ့လို့..လို့ပြောရင် မှားမည်မထင်။ General Knowledge တို့၊ Personality တို့လည်း ကြည့်တာပေါ့လေ။
ဒါ့အပြင် အကြောင်းအရာအစုံဖတ်ဖြစ်တော့ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ research project မှာလည်း အထောက်အကူ ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ – research dissemination ကိုလည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပတဲ့ UKFEIT Conference မှာ တက်ရောက်ပါဝင်၊ တင်ပြခွင့်ရခဲ့တာမျိုးတွေပါ။
အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကား လေ့လာချင်စိတ် ဖြစ်အောင်၊ inspiration ရအောင် ထပ်မံဖော်ပြခြင်းသာ။
ကျွန်မ သင်ကြားပေးသည့် Online Class Schedule များကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Cambridge English Online Classes အတန်းချိန်တွေကိုလည်း အောက်ပါလင့်ခ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
How to improve your English skills, Q & A. Bookmark.